U-Iris Scott usebenzisa kuphela iminwe yakhe ukupeyinta imisebenzi yakhe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba sisebenzisa iibrashi ukupeyinta kungenxa yokuba indlela ithiphu ebuthathaka ngayo kwesi sixhobo sichanekileyo esivumela ukuba senze eyona migca igqibeleleyo ngesandla esinesibilini sokwenza ngendlela ephakanyisiweyo.
Kodwa apho u-Iris Scott asisa khona ngemizobo yakhe iphambi kobuchule obungasetyenziswanga nganto Sebenzisa incam yeminwe yakho njengebrashi okanye isixhobo sokupenda. Ngumculi ngokwakhe ophawula ukuba akukho nto phakathi kweminwe yakhe kunye nelaphu, njengoko kusenzeka xa sisebenzisa amalahle, ipensile okanye ibrashi.
Bekusoloko kusithiwa ukutya ngezandla zakho kuthetha ukuba ukutya kunencasa engakumbi. Inokuba yinto yamandla ethu ezandleni zethu ke uScott wagqiba kwelokuba azame ithamsanqa ngale mizobo yeoyile ichukumisayo.
Umzobi uthatha inxaxheba ngokukuko kumbutho wobugcisa obizwa ngokuba "Ithuku", Ebonisa imibala edlamkileyo, imixholo eyakhayo kunye noburhabaxa obuqinisekisa ukuba umbukeli unokuvuya kunye nazo.
U-Iris ukwabonisa ukuba kwimizobo yakhe ufuna bobabini indlela yokuphila yesiqhelo njengokwandiswa kokuqonda. Umzobi usebenzisa ngaphezulu kwe-100 imibala esekwe kwioyile ukuyila imeko enye. UScott kuqala unqwenela ukubonisa amandla afihliweyo kwiminwe anokuba sisixhobo esikhethekileyo sokwenza umhlaba apho ababukeli bezijonga njengenxalenye yawo.
UScott uye eyakhe incwadi apho afundisa khona Inxalenye yobulumko bakhe malunga nale fomu yobugcisa apho endaweni yokusebenzisa iibrashi, esebenzisa iingcebiso zeminwe yakhe ukwenza imisebenzi ekumgangatho ophezulu etsala amandla amakhulu kumnxeba wabo wokukhumbula, bekhumbula abapeyinti bakudala baseFrance. Umsebenzi odlamkileyo kwaye onemibala.
Ukuba siya kwenye Ubukrelekrele bengcinga ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ukupeyinta akukho nto ngaphandle kweminwe ngu-Iris Scott
UTatiana silveira sitsho
Umsebenzi omhle kakhulu. Ukuphucula ifuthe lokuvusa i-olhar yokupenda, ukwenziwa kwayo. Imiyalezo enamandla, vuka, ungonwabi okanye unuke.
Phendula Tatiana Silveira